5 Best Fishing Iindawo EYurophu Ukuze Enjoy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Best Fishing Iindawo EYurophu Ukuze Enjoy
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 16/01/2021)
Akukho nto kakhulu ezifana ngokuloba okokuqala kwindawo entsha. Ukuze naliphi Angler, nokuba zokufuna okanye epheleleyo amava, lokuloba ngumsebenzi elixabisekileyo kubanceda baphumle. Ayikho into ibe ngcono kunokuba yokudibanisa ukhenketho kunye yokuchitha zabo abazithandayo?
Ngethamsanqa labo enjoy ukuloba, nazi iindawo ezinkulu eYurophu ezibonisa iintlobo ngeentlobo zeentlanzi. Ukuba uceba ukwenza iholide yakho elandelayo konke ethetha ngokuloba, sinokubanceda ugqibe apho ukuya. Makhe jonga kwi kuluhlu lwethu of 5 best Iindawo zokuloba eYurophu ukonwabela:
1. Indawo Fishing In Sweden
Ukuba ufuna ukuba balobe eSweden, animele ukubheka phambili kakhulu kunokuba Stockholm kuba iindawo ezinkulu zokuloba. Umzekelo, Stromgatan okulungileyo phakathi komzi, kwaye unalo umbono enkulu. Uyakwazi ukujonga phezu kwisakhiwo kwipalamente Swedish kunye Le Town Old ngexesha lokuloba. Enye indawo ezidolophini i Hammarby Sjostad phezu Hammarby echibini, indawo ethandwa e Stockholm. It unemisebenzi iindawo ezinkulu zokuloba kwaye ngokulula kwi sixeko.
kunjalo, ukuba ufuna amava lokuloba nature zakudala xaxa, akuyi kufuneka ukuba liwuqhube kude Stockholm. Ringsjon Lake inikeza kwezinye iindawo ezintle zokuloba apho ukubamba whitefish kunye rainbow wemifula. Drevviken yenye dike cwaka kufutshane Stockholm, efanayo Ringsjön. Enkulu kwaye ezinzileyo indawo yokuloba, Drevviken Lake uya ukudanisa nawe.
Kananjalo amabombo Stockholm Nqabakazi kunye kwisiqithi Galo, nto leyo yiparadesi lokwenyaniso ekwanti. Uyakwazi singalalisa nentlanzi apho okwanelisa intliziyo yakho, sonwabele indalo Nqabakazi ngayo.
2. Indawo Fishing In France
IFrance lilizwe elihle malunga nawo nawuphi na umsebenzi, ngoko ke akukho lokuloba wonder eFransi okukhulu. Enye indawo ezigqamileyo yokuloba Lac du Bourget, ichibi ezinzulu kunawo yaseFransi. Yeyona indawo umxhelo kuba izindlu phezu 30 iintlobo zeentlanzi. Phakathi kwabo, umqala, Zander, Pike, zahlala ume ngaphandle. Eli chibi ngokwenene Likhonkco ummandla Rhone-Alps.
Ngoko kukho Bassin d'Arcachon ngasezantsi-ntshona kunxweme France - abo babe ukuloba ndifuze. Beautiful ilanga, Amanzi acwengileyo ngekristale, nee-bass zolwandle zezinye zezinto onokuzilindela eArcachon.
Abalobi evela uthando aphesheya Lake Der-Chantecoq, okulungileyo intliziyo kummandla Champagne, iyelelene Paris. Yinto enkulu indawo yabaqalayo, nangona kwizazi ubudala abadla edikeni ngenxa zeCARP omkhulu. Kwezinye iindawo eziphawulekayo French ziquka La Rance River kunye Alder. Zombini ezi othandwayo kwiindawo ezinkulu ukuthatha lwakho usapho on uhambo lokuloba.
3. Indawo Fishing In Italy
Xa Italy, ungaqala njengokuba kakuhle ezinye iindawo best lokuloba eYurophu. Lo mmandla Le Marche inikezela ethile yokuloba enkulu, ikakhulu Cingoli, Pioraco, no Sefro. Bona ukuba amanye amachibi amahle kakhulu Italian ukuloba, wemifula equlathe, Pike, kunye zeCARP, phakathi kwezinye iintlobo. kunjalo, xa kufikwa namachibi, kukho kwakhona ukuba Lake Como emntla, kunye Pike yayo zahlala.
Makhe wakhumbula emlanjeni omkhulu Italian, i Po. It izindlu catfish ingxilimbela kunye carps enkulu eyayiza Ngantoni na Angler. in Tuscany, imilambo zezona ndawo ziphambili zokuloba. Lima kunye aluxhaswanga ziindawo kakhulu ukuba balobe trout kunye grayling.
Kwabo Abalobi abakhetha kuloba amanzi ezivulekileyo, kukho iindawo ezimbini lokuloba enkulu Italy. I Egadi Islands yeSisili unxweme ESardinia uya amnqande nobabini ngobuhle zabo kunye nomgangatho zokuloba zinika. Khangela tuna blue-fin kunye sword blood amazwe akwiMeditera apho, kunye amber-jack, snapper, kunye Garrick eLwandle Tyrrhenian.
4. Indawo Fishing In The UK
the Izikumkani Ezimanyene yindawo eyothusayo, ezifundisa iindawo ezithile lokuloba olukhulu ubuhle ezinobuhle zasendle iziqithi. Ukuba ufuna i catch emangalisayo, i-UK, ukuze ube yindawo elungele wena. Ke apho kufuneka ukha?
Enye yezona ndawo zibalaseleyo eDartmoor, Devon. Ekubeni igama evocative ezifana, awukwazi basilele ukuthelekelela amava nokuloba iintlanzi olambileyo emifuleni ezimnyama. Le Tyne umlambo e Northumberland inombala enikeza ube inzuzo abahlukene ngokuchasene trout ulwandle eziphilileyo bekukho. Oko kwenza le ogqibeleleyo emlanjeni lokuloba ilanga kunye inkulu trout ulwandle catch.
River Clettwr kufutshane kumda England naseWales iza kuba yeyona ndawo ubenomtsalane kubahloli. Khangela ngakumbi ukuba ufuna ukusebenza nzima catch yakho alatyuzayo. Isimo thile lula kakhulu e Strangford Lough, County Ezantsi. Yinto enkulu Loch elwandle i-UK ukuba enyakazelayo ne mackerel, Pollock, kunye haddock, phakathi kwabanye.
Assynt ukuze ibe yeyona ndawo eyoyikekayo zonke - khotsho phantsi omkhulu ezintabeni, kunye zombini iinketho yokuloba ndifuze nahambayo. Fionn Loch yindawo enkulu ukuba balobe trout lweenkobe brown.
5. Indawo Fishing In Germany
Jemani ngokuqinisekileyo ukufanelekele indawo yayo kuluhlu iindawo best lokuloba eYurophu. Ekubeni bebaninzi kangaka nemifula kunye namachibi, bekuya kuba akumangalisi ukuba akazange enze uluhlu. Ezinye iindawo ezininzi ethandwa ekulobeni eJamani kufuneka liquke iDanube indawo. Kwi 8 ubude indawo eBavaria iDanube, uyakwazi ukubamba iyantlukwano enkulu yeentlanzi.
Ukuloba ngaphezulu umlambo, iRhine ne iElbe, uthando ingakumbi e Baden-Württemberg kunye Saxony-Anhalt, ngokulandelana, amava kumangalisa. kunjalo, xa ukhetha ukuloba echibini, kusoloko Ngcayechibi Chiemsee and Lake Starnberg. Zombini yinzulu kakhulu, inala Pike, umqala, kunye bream.
Kuba zonke Abalobi kunye ukudlathuka kweenwele ukuhamba, kukho iindlela ukudibanisa uthando zabo ezimbini ezinkulu. EYurophu inika amaninzi iindawo ayigange enkulu sibe uhlobo kunye nemizi akhulayo ngokufanayo.
Ukuba ufuna ukuluphawula yokuloba enkulu, kukho inala lula yokufikeleleka 5 best iindawo okuloba eYurophu ukonwabela. Xa sele ukulungele ukuba ukubetha amanzi, incwadi amatikiti etreyini yakho ngoku kwaye musa ukukhangela emva!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best Fishing Iindawo eYurophu To Enjoy” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#ukuloba #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips